Ukubunjwa kwama-cysts esibindi sisifo esibi kakhulu esidinga unyango olufanelekileyo kunye olufanelekileyo. Esi sifo, esoloko siphawula kubantu abaneminyaka emashumi mane. Ngokukodwa isasazeka namhlanje, xa sithe sasebenzisa iimveliso ezinobulunga obuphantsi kokutya kwethu. Masithi, kwisiseko seqendu lethu, siqwalasele izizathu ezibalulekileyo zokubunjwa kwama-cysts kwisibindi somntu.
Ngaphambi kokuba wazi ukuba yintoni kanye imbangela yokwakheka kwe-cyst esibindi, masiqwalasele ngokuthe ngqalelo kwesi sifo kunye neempawu zayo eziphambili.
I-cyst (ukusuka kwisiGrike esithi "bubble") ngokuqhelekileyo isigxina se-pathological form which is formed in tissue or organ.
I-Cyst esibindi: unyango kunye nezizathu
Esi sigxina sinodonga kunye neziqulatho. Kodwa isibindi, esichazwe ngokwesayensi, siyilungu elingaphakathi elingenamsebenzi elibaluleke kakhulu kubantu. Isibindi sifumane kwisigxina esiswini ngaphantsi kwesithintelo. Yenza imisebenzi eyahlukeneyo yomzimba kunye nemisebenzi ebalulekileyo kumntu:
- isusa kwizinto ezingaphandle kwamanye amazwe, oko kukuthi i-allergen kunye ne-toxins, ngokuzicwangcisa kwiimveliso ezingenakubungozi;
- isusa emzimbeni womntu ubuninzi bamavithamini, amahomoni kunye neemveliso zokugqibela ezivela kwi-metabolism;
- ibandakanyeka kwisigxina, inikeza iimfuno zamandla zomzimba nge-glucose;
- lawula i-carbohydrates metabolism;
- ii-vitamins ezisebenzayo kumzimba (A, D, B12), i-microelements kunye nama-proteins;
- ithatha inxaxheba ebonakalayo kwinkqubo yokwenza igazi;
- ivelisa i-cholesterol, kunye nee-esters zayo, i-phospholipids kunye ne-lipids;
- ithatha inxaxheba kwinkqubo yokuhlanganiswa kwe-acid acid kunye nokwakhiwa kwe-bile;
- ithatha umlinganiselo ophezulu wegazi ngokwayo, ukuyihlutha;
- ivelisa i-enzymes kunye nama-hormone athatha inxaxheba ngokuthe ngqo kwi-digestion yokutya kwi-duodenum nakwezinye iindawo ezisemathunjini amancinci.
Apha zilapha, eziphambili nemisebenzi esemqoka yesibindi sethu. Ngoko ke, i-cyst yesibindi okanye ezinye izifo ezahlukahlukeneyo, yinkxalabo enkulu yokusebenza komzimba wonke. Ngoko kuyimfuneko ukucinga ngale nto. Kwaye xa uvakalelwa izizathu ezahlukahlukeneyo ze-malaise ezinxulumene nomsebenzi wesibindi, kufuneka uthintane nodokotela.
Kwimichiza, kuyisiko ukuhlukanisa phakathi kweentlobo ezimbini zeengqumbo zesibindi: ii-cysts ezingenasasasitic kunye nama-cysts e-parasitic. Ama-cysts angabonakaliyo kwesibindi, ngelixa i-cyst ngokwayo ifinyelela ubungakanani obukhulu, inokubangela ukuba utshintsho olungafanelekiyo lweengcambu zelungu ngokwalo. Iimpawu eziphambili zeengqungquthela ziyiyo: intlungu eqhubekayo (endaweni ye-hypochondrium), emva kwesidlo ngasinye, loo mntu uziva engathandeki kwisisu. Ukongezelela, iifomati ezinjalo zesibindi zingabangela ukonakalisa ukondla, zenze i-sweating excessive, i-nasusea yesikhashana, ukuphefumula okufutshane, ubuthathaka obunzima bendalo yonke kunye ne-jaundice. Iimpawu eziphambili ze-parasitic form of cysts zi: ukuvakalelwa kwenyameko kwicala lokunene, ukunyamezela, ubumnandi, ukuphefumula okuqhelekileyo. Ngamanye amaxesha umntu onesibindi esonakalisiweyo unokuziva intlungu esifubeni.
Ukongezelela, isifo sinokubangela isicupunu kunye nesifo sohudo.
Apha zilapha, iimpawu eziphambili ezibonisa ngokucacileyo ukwakheka kwe-cyst kwisibindi somntu. Kwaye ngoku gqi beleni siqwalasele izizathu zokubunjwa kwama-cysts.
Ngokwabo, i-cystic formations kwisibindi, kodwa ngamanye amagama ama-pathological cavities azaliswe naluphi na umxholo, njengakuzo zonke ezinye izitho zomzimba, zinemvelaphi eyahlukileyo. Ngokomzekelo, ukugcinwa kwezinto, ngokuqhelekileyo kunokubangela ukuphulwa kweentlobo ezahlukeneyo zokukhutshwa kwe-secretion outflow, eveliswa emzimbeni wethu okanye ngokubhekiselele kwi-necrosis yezicubu kwindawo engqongileyo. Kwaye isizathu esiyinhloko sokwakheka kwama-cysts kwisibindi kukubunjwa kweenkqubo ezahlukeneyo ze-tumor, ukuhlasela kwe-helminthic (i-cysticercosis, i-echinococcosis) okanye ngenxa yokufumana ukulimala okuhlukahlukeneyo.
Ngendlela, ii-cysts ezixhatshazwayo zibhekwa njengeyona yingozi kakhulu kwimpilo yabantu. Ekubeni zonke ezinye iintlobo ze-cyst zikhona ngaphandle kweenguqu kwiminyaka. Ngamanye amaxesha afuneki unyango. Yintoni engenakutshoyo malunga nee-cysts eziphazamisayo. I-cyst enjalo inomnqweno wokwanda. Kule meko. Xa i-cyst ifinyelela ubungakanani obukhulu, isifo sezitho zangaphakathi sinokuvela. Ngenxa yesi sizathu, okokuqala, kucetyiswa ukuba ungabandakanyi ukuhlasela kwe-helminthic.
Okokuqala, ngenxa yale nto kubalulekile ukuba uhlolisise igazi ukwenzela ukubonakalisa kuyo ubukho balezi zixhobo ezikhuselekileyo, ezinokuthi zibe yi-echinococcus okanye i-cysticerci. Udokotela ojongene nesi sifo ngu-gastroenterologist. Nguye omele afake isigulane kwirejista ngexesha lonke leyeza unyango kwaye acebise esi sigulane ngesihloko apho, nini naziphi iimviwo zomzimba kunye nezitho zangaphakathi kufuneka zihambelane.
Kuphela emva kwezi mviwo, isigulane kufuneka sithunyelwe kunyango olulandelayo, oluza kusekelwe kwiziphumo zovavanyo kunye neemeko zokuqhubeka kwesifo ngokwazo. Ngokuqhelekileyo le nkqubela yonyango iyancitshiswa ukuba ihlolwe ngokuqhelekileyo kwaye iyinyanzeliso ngumcebisi, ukuziphatha okuqhubekayo kwesibindi sesigulane kunye nokuchongwa kweenguqu ezahlukeneyo. Inxalenye ebalulekileyo ye-cysts yesibindi iyaphathwa ngokugqithiswa okanye kumanzi. Konke oku kwenzeka phantsi kokunyanzeliswa kwegunya le-ultrasound.
Into ebaluleke kakhulu kule shishini kukuba yishiye ngokupheleleyo nayiphi na indlela kunye neentlobo zokwenza unyango. Ngenxa yokuba, sele esetyenziselwa unyango lomntu, isigulane sinokuzilimaza. Kwaye uncedo olungcono lwelo sifo, njengabanye abaninzi, lukhuseleko olufike ngexesha. Ngoko ungaba luvila ukuba uphumelele uviwo lweemeko jikelele zomzimba kwaye udlulise iimvavanyo eziyimfuneko. Khumbula ukuba impilo yakho isezandleni zakho kwaye ke ungasebenzisi kakubi lo mgaqo. Inhlanhla kwaye ungagula!
Iinkqubo zeSalon: isisu esisisigxina
Indlela yokulahla iigesi?
Shish kebab evela kwinkukhu kunye namasikeji
Inkabi yongeniswa kwiwayini
Soufflé kunye neParmesan